Dmitry Itskov ungomunye wabantu abangu-Russia edume kakhulu. Economist kanye itoho multimillionaire konke kuthinta abantu ngemibono emisha. Yini mayelana nobuntu ezifana Dmitry Itskov laziwe? ocebile kangakanani lo muntu na? Lokhu uzofunda ngokufunda isihloko.
Dmitry Itskov: Biography
Naphezu kweqiniso lokuthi Dmitri ungumuntu zomphakathi, eziphathelene nokuphila kwakhe ngesikhathi ngaphambi kokudalwa edumile ukunyakaza "Russia 2045" lutho waziwa.
Phakathi kwamaqiniso eyaziwa bungabonakala, leyo nsizwa wazalwa ngo-1980 edolobheni lase-Bryansk. Abazali bakhe waba nengcebo lesemkhatsini futhi ngokuphelele zazingenzelwanga ne sphere kwezomnotho, umama - uthisha esikoleni, futhi uyise - umqondisi ethiyetha zomculo.
Ngemva kwesikole, Dmitry banquma ukubhalisela University of Plekhanov eMnyangweni ukuphathwa corporate, isinqumo waba yimpumelelo. Esikhathini isikhungo esifanayo Itskov wahlangana ibhizinisi umlingani wakhe wokuqala - Konstantin Rykov.
Ngisho esikhathini yokutadisha eyunivesithi wadala owaziwa kuze kube manje, inkampani Inthanethi ngokuthi "Nyumedia Stars."
Futhi ngasekuqaleni kuka-2011 Itskov sadalwa ukunyakaza ngokuthi "Russia 2045", lapho athuthukisa khona ukukhulekela ukuthuthukiswa ekuqaleni kohlobo olusha lokuphila komuntu ngosizo ukusebenza ubuchwepheshe ezintsha.
Ngo-2012 washiya ibhizinisi waya inhloko ucwaningo Dmitry Itskov. Sokungafi kwaba umgomo wakhe. Bobabili basolwa ngokudlala amadoda aneminyaka engaphezu kwengu-30, uyobe ukuqinisekisa ukuthi abantu bangaphila phakade.
Bajwayelane Konstantin Rykov eyunivesithi, Itskov cishe ngokushesha yathola ukuba nolimi olulodwa olwaziwayo naye. Abantu abasha umgomo ukwandisa capital yakho ngazo zonke izindlela.
ukusebenzisana yabo yokuqala idalwe ukukhuthaza Rykov umagazini electronic ngo-1998 ngokuthi Fuck.ru.
Ngo-1999, intsha Ushintshele ngokudalwa eziningi amasayithi ziphethwe Goodoo Abezindaba inkampani.
Kodwa imithombo electronic ayikapheli, futhi intsha udale umagazini wokuqala ecwebezelayo, bese ukushicilela izincwadi ne-TV-Inthanethi. Ngakho kwaba khona kanye nabezindaba umbuso.
Phakathi nale nkathi Itskova umlingani babehlukaniswa kakhulu ngokuvakashela ezibiyele bese uya uquqaba, ezisezincwadini zabo baqala ekugqugquzeleni "United Russia" futhi Putin, futhi inkampani iqanjwe kabusha okusha Media Stars.
Ngo-2012 Itskova, okuyinto kwakungenxa ekugqugquzeleni ibhizinisi, ukhathele monotony futhi wanquma ukushiya umbuso abezindaba, ngemva ukuthengisa esigxotsheni yayo inkampani ngoba imali eningi.
Umsuka namalungu ukunyakaza "Russia 2045" ( "Corporation" Sokungafi ")
Lokhu ukuhamba sidalwe ngaphansi kobuholi Itskova ngasekupheleni ebusika 2011. Futhi ngo-2015, iphrojekthi yahanjelwa mayelana 40 ayizinkulungwane abantu (kufaka eziningi ososayensi) ezivela emhlabeni wonke - Russia, USA, Canada, Japan, Germany.
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo eyinhloko ukunyakaza ligcinwe dolobha yaseRussia.
Inombolo "2045", okuyinto ekhona isihloko ezinyakazayo - lona unyaka lapho iphrojekthi usuphothuliwe. Abaningi baphikisa ngokuthi kungakadluli kulo nyaka, i umzimba yokufakelwa ukusebenza komuntu. Sekela isimangalo isivinini ephambene enjalo ukuthuthukiswa lwesintu kanye uHlu Jikelele Lwamakheli.
Phakathi izibalo isayensi owaziwa zinengxenye project ngubani, kukhona ngisho edumile emhlabeni futurologist American - Reymond Kurtsveyl.
Emva ngidalé ukunyakaza "Russia 2045" Itskov ngokushesha uthumele ososayensi emhlabeni-class ukuze imibono yabo, abanye babo baye balungisa izimo zabo, futhi ngenxa yalokho iphrojekthi yadalwa ngaphansi kwegama "Avatar." Isihloko sephrojekthi sathathwa-movie yesayensi.
Ngalesi phrojekthi, isifundo senzeka ezindaweni ezine:
Avatar A. Artificial umzimba womuntu uhlobo laba balobi abakuloba, hhayi intfo begazi. Ukuphathwa Kwenziwa ngokusebenzisa esibonakalayo "ubuchopho-computer". Ngenxa yokuthi lokhu sekwandile sihlelelwe ukudala lokufakelwa kwezitho kwezitho womuntu format entsha, kuhlanganise izinzwa.
Avatar B. Lolu hlobo umzimba yokufakelwa badalelwa ukuba basebenze kuwo benziwa okuhlobene ukuthuthwa ubuchopho bomuntu. Ngokusho okushiwo ososayensi abathile, ubuchopho bomuntu uyakwazi ukusebenza isikhathi eside kakhulu kuneminyaka nezinye izinhlaka, futhi kwezitho zakhe ezazifike ngesikhathi esemzimbeni yokufakelwa ungakwazi bandise nokuphila umuntu kuze iminyaka 200-300.
Avatar V Ngalesi umzimba yokufakelwa senziwa ukufunda ukudluliswa izici komuntu.
Avatar G. Ikhishwa ukudalwa i umzimba yokufakelwa materials ezifana nanorobots. Ngaphezu kwalokho, le nkinga mayelana ekwakheni umzimba ngesimo a uyiqhamukela ngasohlangothini.
Kusolakala Itskova, "Corporation" Sokungafi "iphupho lakhe. Yena kahle limelela ukuthi abantu babeyoba nomuzwa wokuthi esemzimbeni angaphatheki ngeke kusaba khona noma yisiphi izifo ezingathi sína futhi ukulimala, zonke ezingelapheka ngokudlulela kwenye indawo emzimbeni.
Itskova ukuxoxisana Russian Academy of Sciences
Ehlobo lika-2011 ukuba ulwe isayensi-mbumbulu RAS Commission wagxeka ngokugcwele zonke izifundo, eyayiqhutshwa ngaphansi kokuqondisa Itskova endlunkulu ukunyakaza "Russia 2045". Ukuphendula angaphinde adelele kanjalo Itskov wabiza abameleli Russian Academy of Sciences ukuqhuba ukubuyekeza eningilizayo yazo zonke lezi izifundo eyenziwa ukuhamba kwayo.
Ngemva yokuqinisekisa, okungukuthi 11 Agasti 2011, Russian Academy of Sciences kuqashelwe ukuthi le cwaningo yesikhwama non-state lokuhloswe ngato ekwenteni ncono nokukhuphula ikhwalithi obuphelele yokuphila komuntu. Ngakho-ke, kukhona emphakathini.
Ukuqala kokusetshenziswa the Congress wokuqala "Global Ikusasa 2045"
Engqungqutheleni owawusedolobheni ngaphansi kobuholi ukunyakaza "Russia 2045" ngokubambisana Institute of Oriental Ucwaningo we-Russian Academy of Sciences, lwenziwe esikhathini kusuka 17 kuya ku-20 Februwari 2012 eMoscow. He nikela yezinkinga global njengevolomu ushintsho impucuko ngenxa ukuthuthukiswa ngokushesha ubuchwepheshe.
Itskov nethimba lakhe esethulwa eMihlanganweni Yesigodi esihlakaleni umcimbi kiberprotez, wakhe ubuhanjelwe neyrointerfeys. Kodwa Okwavelela esimisweni yayinesihloko Avatar "Dima" (ngokusho amazwana Itskova, lesi sithombe uhlobo A).
Congress Okwesibili "Global Ikusasa 2045"
The Second Congress ngaphansi kobuholi ukunyakaza "Russia 2045" wathatha indawo ezingeni ngaphezulu emhlabeni wonke, okungukuthi e-New York. Usuku lomhlangano yahlala 15-16 Juni 2013.
Le mali iye ngokugcwele anikezelwe iphrojekthi "Avatar", futhi ngokufanelekile, iningi amalungu akhe Onjiniyela izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba amarobhothi.
Lo mcimbi abangela isiyaluyalu esikhulu phakathi omagazini angaphandle, okwaholela yokuthi inani labamba iqhaza kule nhlangano "Russia 2045" liye landa kakhulu.
Kuze kube manje, Dmitry cishe akukho isikhathi, ngoba njalo wahlanganyela ucinge ngezimali kanye laboratories yesimanje. Kuyaphawuleka ukuthi Itskov esichithwa ukuthuthukiswa iphrojekthi "Avatar" ezingaphezu kuka $ 3 million of esikhwameni sakhe.
Zonke isikhathi Dmitry Itskov, ogama biography ugcwele izinto ezithakazelisayo, uchitha endleleni, njalo ngokwanele emini, wahambela emazweni amaningana.
Kodwa uma Itskova isikhathi kuba sengathi khulula, ubuchitha ngokuya cishe zenkolo. Uyazindla, noma uya endlini yakhe siqu edolobhaneni elincane.
Dmitry futhi uyakuthanda ukufunda izincwadi kumafilosofi kanye psychology. indlu yakhe igcwele izincwadi ngezihloko zenkolo.
Kule ndawo, Dmitry Itskov, ogama fortune elilinganisiwe izigidigidi, abazange baphumelele. Ngenxa ukusebenza okuqhubekayo alinaso isikhathi abathandi ashade futhi abe nabantwana, ngisho ukuhlangabezana nentombazane uhambe naye ngosuku.
Ngesikhathi esifanayo ekuphileni kwakhe siqu, akavumeli muntu, ikakhulukazi izintatheli, ethi wayengafuni ukuba ziqale ukubonakala engakapheli u ome njengeqanda.
Kodwa Dmitry siqiniseke ukuthi wayesenalo isikhathi esiningi futhi ngokuqinisekile maduze azithola ekuso owesifazane ngubani hhayi kuphela ube nentshisekelo imali yakhe, kodwa futhi ukuqonda uthando lwakhe okweqile yesayensi.
Futhi kulesi sigaba, Dmitry Itskov - multimillionaire oqhubeka lo msebenzi "Avatar".
Confectionery "kukaRoshen" linikeza imikhiqizo eliphezulu futhi ukunambitheka ephelele
Mohamed Al-Fayed: Biography nesithombe
I-tendonitis yonyawo: ukwelashwa nokuvimbela
Lipase - Lipase kuyinto ... Igazi: umthetho
Amazinga yolwazi lwezenhlalo
Weight Loss Imikhiqizo: Indlela hhayi ukulimaza ngokwakho
Ama-Movie ngu elves, dwarves, Orcs: uhlu okungcono
Isenzo: ukutshala nokunakekela izihlahla ezidumile
Sifunda kanjani amaprotheni asebusika